3 siyaabood oo aad ku ciyaari MKV daaqadaha media player part 2
3 siyaabood oo aad ku ciyaari MP4 daaqadaha media player
Waxaa jira tobanaan kun oo arrimaha dadka isticmaala ku wajihi ee la xiriirta files mp4 iyo sabab la mid ah waxaa muhiim ah in la ogaado in kasta oo arrinta ku wada xiriira kale oo halkan ku dhowaad isku mid ah xalka lagu dabakhi karaa in inta badan kiisaska . Tutorial waxaa loo qoray si ay u hubiyaan in user ay wajahayaan arrimaha ku ciyaaro files mp4 ciyaaryahan warbaahinta aan wada cafiyo oo kaliya balse arrinta ayaa sidoo kale waxaa lagu xalin si loo hubiyo in haddii ay jirto waqti soo socda ka dibna user ka dhigi kara isticmaalka this umeerin iyo aad u hesho arrinta la xalin.
Qeybta 1: Windows Media Player ma ciyaari .mp4 videos sax ah
Qeybta 2: Beddelaan videos mp4 isticmaalaya Wondershare
Qeybta 3: Ku rakib codecs mp4 ka microsoft.com
Vote: Ma waxaad isaga Windows Media Player?
Waxaa jira dhowr ka mid ah arrimaha keeni kara in dhibaatadan. Laga soo bilaabo hardware in software xitaa haddii barnaamijka hal yar ma aha ilaa sumadda waxa uu abuuri doonaa arrimaha u user ee arrintan la xiriira. Sidaa darteed waa lagama maarmaan si loo hubiyo in sababta ka dambeysa in la falanqeeyay oo arrinta go'an yahay sida ugu dhakhsaha badan. Arrinta ugu wajahay arrintan la xiriira waa xaqiiqada ah in baakad codec aan ku rakiban ama kuwa lagu rakibay by default aan la updated iyo kuwan qalaad fur-tago iyo xeerarka la abuuro arimo u user. Dhibaatadaan marna waa adag tahay in la ogaado sida ee Duke of horumarinta ee sayniska iyo farsamada waa mid aad u fudud in la hubiyo in dhibaatooyinka lagu xalliyaa sida ugu dhaqsaha badan tallaabo loo baahan yahay waa la qaatay arrintan la xiriira. Tutorial waxa kale oo hubin doona in user eeliyaan Diintiinna hadday jirto waa markii labaad ee arrintan la xiriira oo uu helo dhibaatada go'an sida ugu dhakhsaha badan tutorial waxaa la akhriyaa. Major gabyaa iyo arrimaha la xiriira arrintaas oo keeni gaba mp4 waa sida soo socota:
Mp4 aan soo ciyaaray oo dhan
Users waxaa soo food saartay arrinta la audio
Arrinta of video / .Wadashaqayntaas codka
All of kor ku xusan
Si loo hubiyo in aan dhibaatada la xalin waxaa muhiim ah in la ogaado in user ah waa in la hubiyo in arrinta la xalin kulan ee ah in ay la soo sharxay in tutorial si yoolka ugu dambeeya ee xalinta dhibaatada waxaa lagu gaarayaa in buuxa sameeyo.
Version of windows media player ma taageeraya files ah:
Ka dib waa liiska arrintan la xiriira in ay tahay in maskaxda lagu hayaa:
Wondershare Waa kan ugu khayr iyo gobolka convertor tahay in loo isticmaali karo si loo hubiyo in arrinta ciyaaro qaab mp4 files yihiin xalin iyo user helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira. Si loo hubiyo in arrinta la xalin user waa in sidoo kale la ogaado sifooyinka muhiimka ah ee barnaamijka iyo nidaamka la xidhiidha, kuwaas oo loo macnayn doonaan in qaybtan.
Muuqaaladan muhiimka ah waa sida soo socota:
Barnaamijka waxaa ugu fiican si loo hubiyo in qaab kasta oo waxaa loo baddalaa 30 jeer kale dhaqso iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user ka muuqan raaxaysan karaan qaabka la gediyay guud ahaan qalabka kala duwan iyo dhufto ee la xiriira in lagu taageeraa arrintan la xiriira.
User wuxuu hubin doonaa in qaab ah waxaa loo baddalaa ka 2D in 3D aan arin kasta oo sabab la mid ah waxa ay sidoo kale hubineysaa in video ah waxaa loo baddalaa aan arrin kasta oo arrintan la xiriira ka dhigi kara. Waayo-aragnimo u weyn ee arrintan la xiriira waa wax u ogolaanaya user si aad u hesho waayo-aragnimo ugu fiican oo ka mid ah la gediyay videos.
Software wuxuu taageeraa qaabab 150+ oo ka dhigan tahay in user a badalo karaa qaab kasta oo kale in kuwa la taageeray oo wuxuu ku raaxaysan karaa qaab kasta oo ay diinta. Lacagta onetime ee software-ka waa wax u ogolaanaya user si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira.
Geedi socodka waa in la raaco arrintan la xiriira waa sida soo socota iyo sabab la mid ah waxa aad u muhiim ah in la ogaado in user waa in la hubiyo in talaabo kasta oo kasta oo la socda oo aan Xiso kasta si ay u helaan gobolka natiijooyinka tahay oo aan arrintan wax ka dhigi :
1.From ka URL user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in .exe barnaamijka la soo bixi, rakiban oo ay maamulaan si loo bilaabo nidaamka:
2.Beerta user waa ka dibna riix badhanka dar files ku darto video doonayo si fudud:
Qaab saarka 3.Beerta sida baahida loo qabo iyo baahida loo qabo ka dibna waa in la soo xulay oo waa in aad loo dhawro in qaab waa la jaan qaada WMP si jihada saxda ah ayaa qarka u saaran iyo habka dheeraad ah horumarka:
4.In tallaabadii u dambaysay user waa in la hubiyo in button diinta ee la isku soo riixayo sameeyo iyo user helo faylka badaley iyo tan ayaa sidoo kale ka dhigan dhamaadka habka buuxda. Tani 4 habka tallaabo waa wayto easiet rhe ka adkaan arrinta sakhiray:
File 5.The ka dibna waxaa la ciyaari karaan iyaga oo aan wax arrintan iyo dhibaatada:
Tani waa midda labaad iyo hab casriga ah ugu xeel dheer in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan. Waxaa sidoo kale in la xuso in macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan rakibo waxaa laga heli karaa URL https://support.microsoft.com/en-us/kb/316992 halka ay u soo bixi codecs waxaa lagula talinayaa in ay paste URL https: / /www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=507 inta ay socoto si loo hubiyo in jihada saxda ah waxaa mar kale laga qaaday. Geedi socodka dhamaystiran waa sida soo socota:
File mp4 1. in siinayo qalad ah ay tahay in la ciyaaray iyadoo la isticmaalayo ciyaaryahan warbaahinta si qalad ah ee soo socda u muuqataa,
2.It waa sidoo kale in la xuso in button caawimaad web waa in la sii adkeeyey in la sii wado dheeraad ah ee arrintan la xiriira iyo in la hubiyo in hannaanka horumarka,
3.WMplugins.com waa khad ah in uu yahay markaas in la raaco:
4.Within bar raadinta sidii loo soo sheegnay ka hor iyo sidoo link ie URL ka https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=507 waa in la dhejiyo si aad u hesho natiijooyinka :
Button 5.The download waa in la sii adkeeyey iyo dardar waa in la raaco si loo hubiyo in codec la rakibo iyo ciyaaryahanka la billaabeen waa in la hubiyo in hannaanka uu dhammaanayo buuxa iyo faylka la ciyaaray aan arin kasta:
Wondershare Video Convertor Ultimate Haa Dhamaan qaababka Haa mar walba
Codec Microsoft rakibaadda No Kaliya mp4 Mararka qaarkood
Wondershare Video Convertor Ultimate waa barnaamijka ayaa waxaa ku taliyay miiska oo uu soo kor lagu soo sheegay oo waxaa sabab u ah sababaha soo socda by:
Laga soo bilaabo Android inay macruufka iyo ka m2ts in MKV Wondershare Video Convertor Ultimate taageertaa badan 150+ qaabab si loo hubiyo in uu user marna ka tagay Quusan. Waa sabab la mid ah in ku dhawaad ​​qaab kasta oo user a is dhihi karo ayaa la dhexgeliyey barnaamijka si ay u siiyaan natiijooyinka ugu fiican.
Ma u shaqeeyaan?
Waa barnaamijka ugu fiican si loo hubiyo in shaqada waa qumman yahay oo waafaqsan shuruudaha isticmaala. Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada oo la hubiyo in user helo gobolka oo ka mid ah tahay oo ugu fiican
> Resource > WMP > 3 siyaabood oo aad ku ciyaari MP4 daaqadaha media player part 2